Nagarik News - 'लभ'मा 'फल' होइन, 'राइज' भइन्छ
'लभ'मा 'फल' होइन, 'राइज' भइन्छ
कथाकार कुमार नगरकोटी आफ्ना कथाका पात्रजस्तै अनौठा र रोचक लाग्छन्। प्रेम र यौनका सम्बन्धमा उनका कथामा नवीन तत्व, अभिव्यक्ति र धारणा पाइन्छन्। व्यक्तिगत हिसाबले पनि उनी प्रेमबारे अलिक पृथक्, अलिक 'विष्फोटक' मान्यता राख्छन्। उनीसँग सुजित मैनालीले शुक्रवारका लागि प्रेम संवाद गरेका थिए। धेरै अंग्रेजी शब्द मिसाएर बोल्ने उनको शैलीलाई यहाँ जस्ताको तस्तै उतारिएको छ।
कुनै सुन्दर केटी देख्दा तपाईंभित्र प्रेम उर्लन्छ कि यौन भावना?
अपरिचित युवती देख्दा यौन भावना जागिहाल्दैन। तर, प्रेम पूरै उर्लिहाल्छ भन्ने पनि होइन। सुन्दर संगीत, सुन्दर पेन्टिङजस्तै हो, सुन्दर युवती। सुन्दर युवती देख्दा कुनै राम्रो कविता 'रिसाइट' गरेको आनन्द मिल्छ।
प्रेम र यौनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सेक्स धेरैसँग गर्न सकिन्छ। 'इट इज नट अ बिग डिल।' सेक्स गर्ने कुरा हो। 'लभ' चाहिँ हुने कुरा हो।
प्रेम र यौनलाई छुट्याएर हेर्न सकिन्छ?
म 'प्लेटोनिक 'लभ'मा होइन, 'पोएटिक 'लभ'मा विश्वास गर्छु। काव्यको 'इसेन्स' र सौन्दर्य भएको प्रेमलाई म उन्नत ठान्छु। प्रेमी र प्रेमिका 'इन्टरमिङ्गल्ड' भएको, अन्तरालम्बित भएको अवस्था मलाई गजब लाग्छ।
यस्तो 'पोएटिक 'लभ' कतिजनासँग गर्नुभयो?
थुप्रै गरेँ। मैले गरेका हरेक प्रेम 'पोएटिक' खालका थिए। मैले प्रेम गरेकाहरूले मसँग कस्तो प्रेम गरे, थाहा भएन। प्रेममा मैले कहिल्यै 'क्लेम' गरिनँ। प्रेमीले सिर्फ प्रेम गर्छ, 'यो मेरी प्रेमिका अथवा प्रेमी हो' भनेर दाबी गर्दैन। प्रेम दाबी गरिने वस्तु होइन। 'लभ इज नट अ कमोडिटी।' र, अर्को कुरा, बिहे भन्ने 'इन्स्टिट्युसन' समाजले बनाएको हो। प्रेमको गन्तव्य बिहे हुन सक्दैन। बिहेले प्रेमलाई बन्दी बनाइदिन्छ। 'द्याट्स ह्वाई आई लाइक अ लभ ह्विच गोज बियोन्ड द म्यारिज।'
'यू नो, आई एम अ ड्रिमर।' काखीमा किताब च्यापेर हिँड्दै गरेकी कुनै युवती देख्दा पिछा गर्न मन लाग्छ। उसले कुन किताब पढिरहेकी होली भन्ने जान्न मन लाग्छ।
भन्न पो सजिलो छ, प्रेमी अथवा प्रेमिकाले अर्कोसँग बिहे गर्दा कम्ता पीडा हुन्छ!
पीडा हुन्छ, त्यसैले त त्यो भावना प्रेम हो। प्रेमबारे ठूलठूला साहित्य लेखिएका छन्, राम्रा म्युजिक कम्पोज गरिएका छन्, पेन्टिङ कोरिएका छन्। यी सबै आर्टको रचनागर्भ प्रेम नै हो।
प्रेमको विपरीतार्थ शब्द पीडा होइन। प्रेममा मिलन अथवा बिछोड विपरीत क्षण होइनन्। बिछोडको पीडा प्रेमको एउटा 'पार्ट' हो। प्रेमी अथवा प्रेमिका अर्कैसँग बिहे गरेर गएपछि भयंकर दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, शोक हुन्छ। मर्छु कि जस्तो 'फिलिङ' आउँछ। यी सबै पीडा प्रेम हुन्। 'इफ यू ह्याभ करेज टू सेलब्रेट डेथ, देन ओन्ली यू विल बी लाएबल टू बी इन लभ।'
टुटेका प्रेमको सम्झना कत्तिको आउँछ?
सम्झना आउँदा दुःख लाग्दैन?
काँ' लाग्नु! 'वो भी क्या जमाना था, हम भी कभी प्रेमी हुआ करते थे' जस्तो लाग्छ। रमाउँछु पो बरु!
'ब्रेकअप'पछि फेरि भेट भएन, कुनै प्रेमिकासँग?
भेट्न मन लाग्दैन?
भनिसकेँ नि, लालसा बोकेको र 'क्लेम' गर्ने खालको प्रेममा म विश्वास गर्दिनँ। प्रेममा हुँदा त 'ऊ मेरी प्रेमिका हो' भनेर 'क्लेम' गर्नु त मलाई वाहियात लाग्छ भने तपाईंले भनेजस्तै 'ब्रेकअप' भएपछि पनि 'क्लेम' गर्दै कसरी हिँड्नु? फेरि म फकीर 'टाइप'को मान्छे हुँ। 'आई डन्ट लाइक पोजेसिभनेस।'
कुरा सन्न्यासीको जस्तो गर्नुहुन्छ। सांसारिकतामा किन रम्नुभएको?
सायद मलाई सांसारिकतामा श्रीमती र छोरोले बाँधेका होलान्। मेरो दोस्रो बिहे भएको छ र एउटा छोरो छ। उनीहरूले नै बाँधिराखेका छन्, मलाई। फेरि, सन्न्यासी भएर सांसारिकताबाट भाग्नु मलाई उति सारो उचित लाग्दैन। मेरो पहिलो 'लभ' एउटी विवाहित युवतीसँग थियो। उसको नाम मिरा थियो। प्रेममा भावुक भएर मैले त्यतिबेला आफ्नो नाम 'मिराज' राखेको थिएँ। मिराज अर्थात् मिराको। कुमार मिराको हो भन्ने म आफ्नो नामबाट झल्काउन चाहन्थेँ। मिराजको अर्को अर्थ हुन्छ, मृगतृष्णा। संसार फगत मृगतृष्णा हो भन्ने अर्थ पनि वहन गर्थ्यो, मिराज नामले। यो नामबाट मैले केही कविता पनि लेखेको थिएँ।
त्यसपछि रितु गौतम भन्ने केटीले मसँग 'लभ' गरिछ। एक दिन 'म तपाईंसँग 'लभ' गर्छु' भनी। मैले पनि उनलाई 'लभ' नगर्नुपर्ने कारण थिएन। 'बिहे गरौँ' भनी। 'ह्वाट फल्ट इज देयर इन एक्पिरियन्सिङ म्यारिज?' यस्तै सोचेर बिहे गर्न पनि राजी भएँ। ऊ बाह्मण परिवारकी, म नेवार। जातपातले प्रेमलाई छेक्ला भनेर उसले 'भागौँ न त' भनी। प्रेम गर्न म तयार थिएँ, बिहे गर्न पनि। तर, भाग्न तयार थिइनँ। आखिर भागेर कहाँसम्म जाने? मैले रितुकी आमासँग रितुको हात मागेँ। तर, बिहेको डेढ महिनापछि मेरो पहिलो वैवाहिक जीवन टुट्यो।
'फर्स्ट लभ'सम्बन्धी आफ्नो संस्मरणमा तपाईंले 'ब्रेकअप' भएको लेख्नुभयो। 'ब्रेकअप'पछि आफू कति रुनुभयो, लेख्नुभएन। आफ्ना भावना किन लुकाउनुभएको?
एकदमै दुःखी भएँ त्यतिबेला। ती चोट र व्यथाले नै आज मलाई यस्तो बनाएका होलान्। रितु र मेरो जात नमिल्ने भएकाले 'म्यारिज' र 'फेमिली'मा द्वन्द्व सिर्जना हुन थाल्यो। 'एन्ड फर्दरमोर, आवर लभ वाज केज्ड बाई द म्यारिज।' यस्ता द्वन्द्वका गन्थन के लेख्नु भनेर नलेखेको हो। भावना लुकाएको होइन।
प्रेमको स्वाद मिठो कि सेक्सको?
मलाई त सेक्सकै मिठो। 'आई केम टू लभ थ्रु द करिडर अफ सेक्स।' १६ वर्षको उमेरमा मैले एउटी नगरबधूबाट सेक्सको स्वाद चाखेँ। प्रेमको स्वादचाहिँ आफ्नै जीवनको तीसको दशकतिर चाखेँ।
हिजोआज 'पङ्क लभ'लाई धेरैले गाली गरेको सुन्छु। किन गाली गर्नु? 'ह्वाट फल्ट इज दियर इन गेटिङ लस्ट अन द लस्ट?' फगत भौतिकवादी भएर म यो सब भनिरहेको छैन। मानिसको अस्तित्व वीर्य र रजसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले योप्रतिको आकर्षणलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
सेक्समा लीन भएको बेला तपाईंले साक्षी भावले कहिल्यै आफूलाई हेर्नुभएको छ? सेक्समा लीन भएको बेला तपाईंको शरीर चल्छ। दुवै 'पोल्स'को 'रिदम' हुन्छ, त्यहाँ। तपाईं उफ्रिनुहुन्छ, पल्टिनुहुन्छ, असिनपसिन बन्नुहुन्छ। कति 'कमिटमेन्ट' हुन्छ त्यहाँ? कति 'डेडिकेसन' हुन्छ? सेक्सबाट सिकेको 'कमिटमेन्ट' र 'डेडिकेसन'ले नै भोलि प्रेमलाई 'ब्युटिफुल' बनाउने हो। यसले नै प्रेमलाई 'सुप्रिम ब्युटी' प्रदान गर्ने हो। आखिर सेक्स भनेको प्रेमसम्म पुग्ने करिडर न हो!
प्रेम संयोगको उपज हो कि लेखान्तको?
'नथिङ इज प्रिडेस्टाइन्ड इन दिस वर्ल्ड।' सबै कुरा संयोगकै परिणति हो। प्रेम 'कोइन्सिडेन्टली इनरिच्ड' हुने कुरा हो।
प्रेमसम्बन्धी लेखिएको कुन किताब तपाईंलाई राम्रो लाग्छ?
लियो टल्सटोयको 'अन्ना कारेनिना' र गुस्ताभ फ्लोबर्टको 'मदाम बोभरी'।
दुवैमा 'एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्स' छ र दुवैको अन्त्य 'ट्र्याजिक' खालको छ।
अँ साच्ची, 'आई लभ पारिजात्स 'शिरीषको फूल' एज वेल।' यसकी पात्र सकम्बरी मलाई प्रेमिकाभन्दा बढी प्रिय लाग्छिन्।
'भ्यालेन्टाइन्स डे'को अवसरमा प्रेमीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
प्रेममा धेरैले 'मिटिङ प्वाइन्ट' खोजिरहेका हुन्छन्। रुखको छहारी, ल्याम्पोस्टमुनि, बगैँचा अथवा एकान्तलाई 'मिटिङ प्वाइन्ट' बनाएर अंकमाल र चुम्बन गर्दै आउनुभएको छ होला। तर, 'मिटिङ' ठूलो कुरा होइन। प्रमुख कुरा 'मेल्टिङ' हो। त्यसैले 'मेल्टिङ प्वाइन्ट'को खोजी गर्नुस्।
'मेल्टिङ प्वाइन्ट'मा पुग्नुभयो भने दुवै एकअर्कामा 'डिजल्भ' हुनुहुनेछ, 'इन्टरमिङ्गल्ड' हुनुहुनेछ। त्यहाँ 'मेलनेस' अथवा 'फिमेलनेस' पनि बाँकी रहनेछैन। कुनै 'क्लेम' अथवा 'पोजेसन'को भाव छ भने फाल्नुस् र आफ्नो प्रेमलाई सस्तो 'कमोडिटी' बन्नबाट बचाउनुस्।
'भ्यालेन्टाइन्स डे'मा कतिका प्रेमप्रस्ताव अस्वीकृत होलान्। 'ट्र्याजिडी'मा परेर कति प्रेमी तपाईंले भन्ने गरेको दारुमहल पुगेका होलान्। उनीहरूलाई पनि केही भनिदिनुस् न!
'देयर इज नथिङ ट्र्याजिडी एज सच। दोज प्याङ्गस एन्ड ग्रिफ आर नथिङ बट द ट्रेजर्स अफ लभ।' ट्र्याजिडी भनेको प्रेमको उपहार हो। यसले उत्पन्न गराउने सन्ताप समन गर्न दारुमहल पुगेका प्रेमीहरूलाई म भन्न चाहन्छु– भ्यालेन्टाइन बूढालाई सम्भिँ्कदै अर्को एक क्वार्टर थप्नुस्।' प्रेमको पीडामा दारु खानु प्रेमप्रतिको सम्मान हो। सक्नुहुन्छ भने खाएर 'वाइल्ड' हुनुस्। तर, चिन्ता नगर्नुस्, 'ट्र्याजिडी'को अवधि गुजि्रनेछ र अहिलेको क्षण भोलि 'नस्टाल्जिया' बन्नेछ। 'ट्र्याजिक मोमेन्ट विल बी द बेस्ट मोमेन्ट अफ योर लाइफ।' यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु। भोलि आफ्ना छोरानातिलाई 'हम भी कभी दिवाना होकर दारुमहल जाया करते थे' भन्नुको आनन्द बेग्दै हुनेछ।
अंग्रेजीमा भनिन्छ नि– 'फलिङ इन लभ'। त्यो भनेको के हो?
यो गलत 'कोनोटेसन' हो। 'लभ'मा 'फल' भइँदैन, 'राइज' भइन्छ!
मतलब, प्रेममा 'इगो ड्रप' गर्नुपर्छ भनेको हो?
ब्रदरले एकदमै ब्युटिफुल कुरा गर्नुभो। 'इगो'को सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ 'लभ'मा 'फल' हुने कुरा जायज देखिन्छ। 'इगो' प्रेमको शत्रुमात्र होइन, 'डिजिज' नै हो।
एक वाक्यमा प्रेमलाई परिभाषित गर्नुपर्दा...
'इट इज द ग्रेटेस्ट ह्यापेनिङ अफ दिस वर्ल्ड।'
फिल्म 'सिलसिला'मा सिलसिलेवार चुम्बन दृश्य दिएर नेपाली फिल्ममा पाइला टेकेकी सोनिया केसीको पर्दामा चहलपहल घटेको छ, अचेल। किनभने त्यसपछि उनीद्वारा अभिनीत फिल्म सफल नभएपछि उनलाई निर्माता/निर्देशकले भाउ दिन छाडेका छन्।